Colka Waraf ma lagu dayey? | KEYDMEDIA ONLINE
Bashir M. Hersi - Soomaalidaa waxay tiraa: “Mar i dage Allaha dago, mar labaad idagase Anaa is dagay” Xadiiskuna waa kii lahaa: “Mu’minka god laba mar lagama wada qaniino” murti kale waxay leedahay: “Nin jiifa lama lagdo” mid kale waxay tibaaxaysaa: “weel walba wixii ku jiraa ka fiixa/dhalaala”
Maalmihii u dambeeyay, waxaa magaalada Muqdisho laga waday dadaallo la xiriira sidii loo dhoodhoobi lahaa Xisbi ay ku mideysan yihiin haraadigii Wadaadadii hubeysnaa ee ka tirsanaa Midawgii Maxkamadaha Islaanka (MMI), kuwaasoo magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay xisbi cusub oo siyaasi ah, oo loo bixiyey “MIDNIMO".
Xafladda magac bixinta xisbiga MIDNIMO waxaa lagu qabtay Hotelka “Naasa Hablood 2″ ee magaalada Muqdisho, kana soo qeybgaleen taageerayaal MMI-daha oo rag iyo durmarba leh, lana doortay Xoghayaha iyo Gudoomiyaha xisbiga Midnimo.
Ha yaacadadii shalay, ee ay ku jireen kuwo argagixiso ahaa, kuwo qabiil dartii u galay iyo kuwo hunguri doon ahaa, waxaa dhammaan la wada doojinayey dacar Diimeedka, waxaan sidaa u leeyahay qof walba oo dhadhanshay oo aan akhas dhihin maba jiro! Yaa isu keeni kara, intaa oo kala maan ah, kala dan ah, kala ujeed ah iyo kala aragti ah? Ani ahaan waxay ila tahay Awr kacsi, waana midda aan u iri Dacar Diimeedka, illeen inta diintu daacadda ka ahayd ayaa aad u yarayde.
Hubaal in lagu hungoobay in dadka loo kala saaro Calmaani iyo Islaami, qaybintaan waxaa u Waqlalay Wadaadadii waallida waday, in kastoo Calmaani la sheegaaba jirin xilligaa, oo rag qawlaysato ah qarwayeen, haddana danta ayaa dhaafi waysay in wax la qaybsado, waaba su’aale: maxaa qofka loogu faquuqayaa waxa uu aaminsan yahay? Ama aragtidiisa siyaasadeed? Ama hannaanka uu u arko in loo maareeyo nolosha? War hooy Soomaaliyeey goormaad ka gudbi dibaadinimada?.
Bulshadu waxay ka dhigan tahay maahmaahdan sadarka sare ku xusan, magacood ba’ayaasha miyeysan ku filnayn wixii dhib dhacay? Miyeysan ku filnayn wixii dhaawac dhacay? Miyeysan ku filnayn wixii dhimasho dhacday?
Miyeysan ku filnayn wixii qax dhacay? Miyeysan ku filnayn inta goor oo awood iyo ciidan nalagu faragaliyey? Miyeysan u ujeedin in wadanka qaybin lixaad leh ku socoto? Waxaaba la yaab ah inaysan ka hadlin Xabashida iyo Keenyaanka wadanka dadka ku dhex xasuuqaya! Anigu waan garan la’hay meesha ay wax ka arkaan.
Ilama ahan in sidaa loo wada dareensan yahay, waxaase la wada dhadhanshay silacdilyadooda iyo saxariirintooda, haddaba aan ka wada gudubno jadbada iyo xadrada aan xigmadda lahayn, caadifadda iyo caqliga xiran, aan xisaabtanno si aan naloo xaraarujin, haddii kale sida lagu jiro ma ahan mid laga baxayo, maalin Qabiil maalin Diin, miyaan marna Qaranka la soo hadal qaadeyn?
Waaba ayaan darree maxaa labadaan naluugu daqraa? Ama naluugu dirqinaa? Dawladnimo Qarannimo, Garsoon, Sinnaan,iyo Hoggaan, midna miyaan la doonayn? Mise waxaan u wada badinnay dhan aan wanaaggu ku jirin.